Sebenzisa umkhondo we-GPS ukubamba iqabane lokukopela | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Umhlaba uyaphuhliswa ngumntu ngamnye odlulayo. Sinokubona izinto ezininzi ezintsha eziqala ukwenziwa imihla ngemihla. Ngokweli nqanaba, umntu uya kungena kwixesha elitsha lonke eligcwele igajethi ezimangalisayo kunye nezixhobo. Kolu lwandle lolwakhiwo lwanamhlanje noluncinci, kukho into yokuqala yesayensi ebizwa ngokuba yi-GPS. Ke, iyintoni iGPS? Makhe sijongise ngokukhawuleza kuyo, emva koko siya kuxoxa ngakumbi ngayo.
IGPS imele “Inkqubo yokuBekwa kwiHlabathi kuye”. Inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS inezixhobo eziphathwayo ezivumela abantu ukuba babeke iliso kunye nokulandelela iindawo zabo ngephanyazo. Inokuphawula eyona ndawo sisithuthi okanye nawuphina umntu nangaliphi na ixesha. IGPS inezinye izinto ezininzi ezenziwayo. Ingasetyenziselwa ukubala isantya, umgama kunye nexesha. Ingasetyenziselwa ukubamba imoto eyebiweyo kwaye, inokusetyenziselwa ukubamba iqabane lokukopela.
Ngaba singasebenzisa i-GPS ukubamba iqabane lokukopela?
Ewe, ukuba siyayibona ekuqaleni, kubonakala ngathi ayithandeki. Njengalo, ngubani obambe iqabane lokukopela usebenzisa iGPS Tracker? Kodwa ukuba siyayibona ngokucacileyo ke siyakuqonda ukuba ukusebenzisa i-GPS ekubambeni iqabane lakho likrexe yeyona ndlela ilungileyo yokwenza. Njengoko sibona ukuba iGPS inenjongo esisiseko yokubonisa indawo yomntu othile. Kwimeko yeqabane elikopelayo, isidingo esisiseko kukulandela umkhondo umntu ekufanele ukuba ukopela. Ke, impendulo, ewe! sinako kwaye kufuneka sisebenzise i-GPS Tracker ekubambeni iqabane lakho lokukopela.
Ngelishwa, iingxaki emitshatweni zizinto ezixhaphakileyo. Nabani na unokuba nale ngxaki kubomi bakhe bomtshato. Kwaye nabani na angawa lixhoba nkqu namagqwetha, iimbaleki, kunye nosaziwayo.
Ngapha koko, ukuba abantu abalunge kakhulu nabona bazizityebi abanakuze bahlale bethembekile, leliphi ithuba esinokulifumana? Imitshato emide kakhulu inokwenzeka ukuba ibe neengxaki njengoko ubudlelwane buba buthathaka njengoko ixesha lihamba. Ngamanye amaxesha, abantu kubudlelwane obunjalo baqala ukufumana ukuthuthuzelwa komnye umntu. Kulapho kuqala khona ukuhla ezantsi. Yinyani enganyanisekanga yamaqabane amaninzi amade ukuba kukho izilingo kunye nokudumala, okukhokelela kwinto yomtshato kunye neziphumo ezibi.
Kutheni usebenzisa iGPS?
Ukuba sibona ngokucacileyo siya kuthi siqonde ukuba iGPS yeyona ndlela ibalaseleyo yokubamba iqabane lokukopela. Masithi, ukuba isibini singena kwingxaki enjalo, ziya kuqala ukukhulisa ngakumbi ukurhanela imihla ngemihla. Oku kuyakwenza ubudlelwane babo buthathaka kwaye kwiimeko ezigqithisileyo, oku kungakhokelela ekwahlukaneni kwabo. Kodwa ukuba basebenzisa isixhobo esilungileyo nesikwaziyo ukubamba umntu okopelayo banokuzi ukulungisa iingxaki zabo ngeentetho nje kunye nothethathethwano. Ke, konke ukulandela umkhondo okwenziweyo kuya kusetyenziswa ngokufanelekileyo kwaye izixhobo ezilula ziya kusindisa ubomi babo bexesha elizayo.
Umntu wazi njani ukuba iqabane liyakrexeza?
Iingxaki kubudlelwane azifani kwisibini ngasinye kodwa kukho amacebiso aqhelekileyo nanqabileyo anokucacisa ukukopela komntu. Esinye sezizathu eziphambili kukungazithembi ngequbuliso. Umzekelo, konke oku ngequbuliso, umntu uqala azive enganqabisekanga xa ehleli neqabane lakhe. Oku kubonisa uphawu lokukopela. Ubukhulu becala, izibini ezitshatileyo zichitha ubomi bazo bonke kunye ikakhulu bazi malunga nemikhwa yomnye nomnye. Ukuba konke ngequbuliso, umntu ubonakalisa indlela eyahlukileyo yokuziphatha oku ke luphawu lokukopela. Iselfowuni ikwangumthombo olungileyo ukujonga ukukopela amaqabane.
Ukutshata iqabane lakho lokukopela usebenzisa i-GPS:
Sibonile yingqokelela yeendlela zokujonga ukuba iqabane liyakopela okanye cha. Inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS isinika iindlela ezilungileyo zokubamba iqabane lokukopela. Makhe sijonge ezinye zeendlela ezinokunika iziphumo ezilungileyo.
Ubuninzi zimbini iintlobo zee-GPS Trackers ezisetyenziselwa le njongo:
Umlandeli wesiqu sakho.
Isithuthi esilandela izithuthi, njengoko igama libonisa, sisetyenziselwa ukulandela umkhondo kwizithuthi zeentlobo ezahlukeneyo. Umntu ufuna nje ukudibanisa isixhobo sokulandela umkhondo kwisithuthi sakhe esisiqingatha esingcono. Ingena kwisitya sombane esinetsimbi esinokudityaniswa ngokulula kuwo nawuphi na umzimba wezithuthi. Ngaphakathi kwebhokisi, kukho iGPS Tracker eqhagamshelwe kwisatellite. Ibona imoto kwaye ihlaziya enye. Ke, ukuba isiqingatha sakho esingcono sithi uhlala kwindawo ethile, unokukhangela ngokulula ngokufumana isikhundla somlandeli. Ngale ndlela, umntu unokubamba iqabane lakhe lokukopela.
Enye yeyona tracker yobuqu. Ikwasebenza njengomsebenzi ofanayo nomkhondo wesithuthi kodwa ukubekwa kwawo kwahlukile. Iza ngesimo sesikhongozeli esincinci esine-GPS tracker kuyo. Isikhongozelo sinokufakwa epokothweni okanye engxoweni yomnye umntu. Inenzuzo encinci ngaphezulu kwe-tracker yesithuthi. Ngokwesiqhelo, imoto inokupakishwa ecaleni kwendlela kwaye ukusuka apho, umntu lowo unokuhamba naphi na apho athanda khona. Ke ngoko, oku kulandelela kunqunyelwe kwisithuthi ngelixa ukulandela ngokwakho kungaphelelanga. Kodwa kwangaxeshanye, inobungozi. Izikhombisi zobuqu zibonakala ngokulula kwaye zinokubanjwa ngokulula xa kuqatshelwe. Kwelinye icala, abakhweli bezithuthi kunqabile ukuba babanjwe kuba kunzima ukufunyanwa.
Kusemthethweni na ukulandelela iqabane lakho nge-tracker ye-GPS?
Kubekho iingxabano ezininzi kunye neengxaki ngokubhekisele kule nto. Abanye abaqeqeshi bomthetho bavumele ukulandelela iqabane elinye usebenzisa umkhondo we-GPS ngelixa kwezinye iindawo zehlabathi, akukho semthethweni ukulandelela nokubeka esweni iqabane lakho ekurhanelwa ukuba liyakopa. Kodwa ukuba sithi ngamagama alula, njengoko sele sibonile ngasentla, ubudlelwane buya buba buthathaka kwaye bube buthathaka ngakumbi njengoko ukukrokra kusanda. Ke, ukuba umntu usebenzisa umkhondo wekhondo umkhondo kwiqabane lakhe, nokuba ubanjiwe ukukrexeza, esi sibini sinokusombulula ingxaki ngokuthetha. Oku kubhetele kunokurhana omnye komnye. Ke, kuluvo lwam, ukusebenzisa umkhondo we-GPS ukulandelela iqabane lokukopela kuluvo oluhle.
6420 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-9 Namhlanje